MUUQAAL Taliyaha Ciidanka NISA “Cid loogu tudhayo ma jirto howlaha Xasilinta ee ka socda Muqdisho - Hablaha Media Network
MUUQAAL Taliyaha Ciidanka NISA “Cid loogu tudhayo ma jirto howlaha Xasilinta ee ka socda Muqdisho
HMN:-Taliyaha Hey’adda Nabadsugida iyo Sirdoonka Qaranka C/llaahi Maxamed Cali (Sanbaloolshe) ayaa sheegay in aan cidna loogu turi doono howlaha lagu xasilinayo magaalada Muqdisho, isagoo ka digay in la siyaasadeeyo ama qabiil loo bedelo howlaha socda.
Taliye Sanbaloolshe ayaa sheegay in howlaha ammaanka lagu xasilinayo uu yahay go’aan ka soo baxay Golaha Wasiirada, balse aanay aheyn howl ay iyaga wataan, isagoo xusay inay yihiin dad la amray, oo fulinaya amarka.
“Magaaladan kama rabo tuute, gaari cabdibile ordaya, askari hubeysan, ma ahan xero xiidan, magaaladan waa caasimad, waji caasimad inay yeelataa la rabaa, oo dadka kalsooni iyo nabad ku maraan”ayuu yiri Taliye Sanbaloolshe oo intaa ku daraya in howlaha lagu sugayo ammaanka in guulo waa weyn laga soo hoyay.
Taliye Sanbaloolshe ayaa sheegay in cid kasta oo ka hor-timaada awaamiirta hey’adaha ammaanka, ha yaraado ama ha weynaado tallaabo adag laga qaadi doono.
Waxaa uu sheegay in magaaladan ay doonayaan inay nabad noqoto, isla markaana mustaqbalka soo socdana ay hub la’aan noqoto.